ကိုယ့် နိုင်ငံရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကိုယ့် နိုင်ငံရေး
Posted by johnnydeer on Aug 6, 2014 in Drama, Essays.. |7comments
2010 မတိုင်ခင်တုန်းကဆို ဟိုတယ်တွေ… တည်းခိုခန်းတွေဆို…ဟိုက လာနှိပ်စက်လိုက်…ဒီက လာနှိပ်စက်လိုက်နဲ့…ရန်သူမျိုး ငါးပါးထဲက …ဟို.. တစ်ပါးဒဏ် တော်တော် ခံလိုက်ရတာကိုး…
အလှုငွေ ဘယ်လောက်အနည်းဆုံးထည့်ပါရန် ဆိုသည့်နည်းကတစ်မျိုး…. ဖုန်းဖြင့် အခန်းပေးပါဦးဆိုသည့်နည်းက တစ်ဖုံ…. ဘာပွဲရှိလို့ အခန်းယူသည်ဖြစ်စေ…မယူသည်ဖြစ်စေ…မဖြစ်မနေ ချန်ထားပေးပါရန် ဆိုပြီး စာထုတ်လို့ က တဖုံ….
နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ အနှိပ်စက်ခံ ခဲ့ရတာပေါ့…
ဟိုဟာ သည်းခံ…ဒီဟာ သည်းခံ နဲ့…ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ ခန္တီစ သည်းခံခြင်းဆိုတဲ့ တရားကိုလဲ တော်တော့ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်ခဲ့ရပါတယ်…
ဘာမဟုတ်တဲ့ …ကိုယ့်ပုဆိုး ကိုတောင် မနိုင်တဲ့သူက မူးထောင်ပြီး …ငါ့ကို ဘာမှတ်နေလဲ…မင်းတို့ ဟိုတယ် သတိထား…ဧည့်စာရင်း လာစစ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်သွားတာတွေလဲ ခံခဲ့ရပါရဲ့….(ဧည့်စာရင်း စစ်လို့ ဧည့်စာရင်း မတိုင်ထားတာတွေ့ရင်ပဲ သေဒဏ်တောင် ကျတော့မလိုလို)…ဒါပေမယ့် သည်းခံလိုက်ပါတယ်…ဪ…ဟောက်စားခေတ်ကိုး လို့…..ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲ တွေးယူလိုက်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ..2010 ရွေးကောက်ပွဲကြီး လုပ်ရော… သူတို့ပြောတဲ့ ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကြီး တက်လာပါရော…အစပိုင်းကတော့ ဘာမှန်း ညာမှန်း သေချာမသိတော့ အရင်နှိပ်စက်နေကြလူတွေ ဟိုရှိန် ဒီရှိန် နဲ့ သိပ်မလာကြဘူးဗျ….ဒါပေမယ့် နည်းနည်းကြာလာတော့ အရင်အချိုးလေးတွေအတိုင်း သွေးတိုးစမ်းလာကြရော…
ကိုင်း…လာရော့…ကို ယ့် အစွမ်း…ပြမှ ဖြစ်ချေတော့မယ်ဆိုပြီး…စာရွက်တစ်ရွက်ယူ…
အကြောင်းအရာ။ ။ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။
မြန်မာ နိုင်ငံသည် 2010 မှစပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ကို ပြောင်းလဲပြီဆိုပြီး ကမ္ဘာသိကြေငြာပြီး ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းကို စတင်လျှောက်လှမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။…စနစ်တစ်ခု ပြောင်းလဲရာတွင် အစိုးရတစ်ခု ပြောင်းလဲယုံဖြင့် လုံလောက်မည် မဟုတ်ပါ…ပြည်သူများကလဲ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်လက်ခံ ကျင့်သုံးမှသာ ပြောင်းလဲသော စနစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်…စနစ်တစ်ခု ပြောင်းလဲရာတွင် စာရွက်ပေါ်တွင်သာ ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပဲ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လူတိုင်း လူတိုင်း၏ စိတ်ဓာတ် အကျင့်တို့လည်း လိုက်လံ ပြောင်းလဲ မှသာ စနစ်သစ်တစ်ခုကို ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်…မြနန်းတော် ဟိုတယ်အနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရသည်ဖြစ်စေ…မရသည်ဖြစ်စေ ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်ပြီဟု နက်နက်နဲနဲ ခံယူကာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များအတိုင်းလက်ခံကျင့်သုံးနေထိုင်ပါမည်…သို့ပါသောကြောင့် ယခင်ခေတ်က အကျင့်ဆိုးများဖြစ်သည့် အလှုငွေ မဖြစ်မနေ ကောက်ခံခြင်း…အခမဲ့ အခန်းတောင်းခံခြင်းများကို (မည်သူ့ကို မဆို) ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်….
ဆိုပြီး စာ ကွန်ပျုတာ စာ စီပြီး ဘယ်ကို စပို့ရမလဲ စဉ်းစာခါရှိသေး…. ရပ်ကွက်ရုံးက အလှုငွေလာကောက်တာနဲ့တခါထဲ ကွက်လတိ…ရော့..ဒါ… နောက်ဆုံးအလှုငွေ…ရော့ ခင်ဗျားတို့ ရပ်ကွက် ဥက္ကဌအတွက် စာဆိုပြီး ပေးလိုက်တာ…ချက်ချင်းပဲ စာကော..အလှုငွေကော လာ ပြန်ပေးသွားပါလေသတည်းတဲ့…ဆိုင် မဆိုင်တော့ မသိ…သူတို့ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလုံးကြီးနဲ့ သူတို့ ပြန်ထိုးရမှာပဲ…အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း ဘယ်သူမှ မလာကြတော့တာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ စာရွက်တွေ ကိုင်ပြီး အခုထိ ထိုင်စောင့်နေတုန်းပါပဲ…
ခေတ်မပြောင်းဘူးလား ???? ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့……
(((မှန်းသလောက်တော့ မပြောင်းဘူး…ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ပြောင်းပါတယ် ))) လို့ ဖြေမိမှာပါ…
ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေကတော့ မတရားဘူးထင်တဲ့ အရာမှန်သမျှ…
ဒီမိုကရေစီ အစစ်လာမှ ဟိုတယ်ပါပေါင်ပြီး အခွန်ဆောင်
အွန်…ခုလဲ ဘာခွန် ညာခွန် နဲပ နည်းတဲ့ အခွန်တွေ ဟုတ်ပေါင်….
ဒီ နည်းနည်း ပြောင်း ပြတာကို ပျော်ဝင်နေသူတွေ အများကြီးးး
ဟို ကာတွန်းလေး သတိရတယ်။
“ပြောင်းလဲ နေပြီ၊ ပြောင်းလဲ နေပြီ” ဆိုတာလေ။
ပုံမှာက သေနတ်ပြောင်း လဲ နေတာ။
ဒါလေး အတွက်တော့ ဗရာဘို ပါ။
အရင် ဟောက်စားခေတ်ကသူတွေကို သူကဘဲအပြစ်တင်နေသေးတယ် တကယ်ဆို ကျေးဇူးတောင်တင်ရအုံးမှာ အခုဘဲကြည့်လေ သူ ပြန်ပြီးဟောက်စားတတ်သွားပြီ
စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာတော့ ဇုံရုံး ကတစ်ဆင့် အလှူ ခံကလာတုန်းပဲဗျ….
အရင်ကလဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်…(ဒါတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လား )
အောက်ဆုံးစာသားကိုတော့ ထိသဗျို့။ အခုအချိန်မှာတော့ အနော်က တစ်မိသားစုလုံးနဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဂျို့